आमाजु बुहारीको हानाहान पछि २ बर्षिय छोरी सहित रुदै आइन शान्ती शाही, बास्तबिकता यस्तो हेर्नुस कसले लुकायो श्रीमान ? – Complete Nepali News Portal
आमाजु बुहारीको हानाहान पछि २ बर्षिय छोरी सहित रुदै आइन शान्ती शाही, बास्तबिकता यस्तो हेर्नुस कसले लुकायो श्रीमान ?
ScotNepal July 12, 2021
काठमाडौ । सुर्खेत माइत भई हाल काभ्रे घर भएकी शान्ती शाही ठकुरी जो बिगत केही महिनादेखि अहिले काठमाडौ स्वम्भूमा अलपत्र परेर बसेकी छिन । उनका श्रीमान तिर्थ लामाले उनलार्य काठमाडौ बोलाएर घर न घाटको बनाएर छाडेका छन । ५ बर्ष अगाडिबाट सुरु भएको यिनीहरुको बिहे यात्रा अहिले यस्तो मोडमा आएको छ जहा २ बर्षिय छोरीले दुख कष्ट र पिडा भोग्नुपरेको छ । बिचरा त्यो अबोध बालिका २ बर्षिय नानीको के नै दोष थियो र ? ।
न त अहिले कोठामा खाने खाना छ न त अरु पैसा न त ग्यासनै श्रीमानलाई खोज्न जादा आमाजुले समेत हातपात गरेर अहिले यस्तो अवस्था बनाएकी छिन | दिदीले न त भाईको नम्बर दिईन न त बुहारी र छोरीको ख्यालनै गरेकी छिन बरु उल्टो हातपात गरेर यस्तो अवस्थामा भेटिएका छन दुबैजना । शान्तीले केही समय अगाडि धेरै मिडियास“ग पनि हारगुहार गरिन तर कसैले पनि कुरा सुनेनन भने केही मिडियाका साथीले त धम्की समेत दिएको बताईन, हेर्नुस —